(မေရီ ကျူရီ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
မာရီ ကျူးရီး (အင်္ဂလိပ်: Marie Skłodowska Curie; /ˈkjʊəri/; ပြင်သစ်: [kyʁi]; တမ်းပလိတ်:IPA-pl ၇ နိုဝင်ဘာ ၁၈၆၇ – ၄ ဇူလိုင် ၁၉၃၄) သည် ပိုလန် ရူပဗေဒနှင့် ဓာတုဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်းကို ရှေးဦးစွာ သုတေသနပြုခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူမသည် နိုဘဲလ်ဆုကို ရရှိခဲ့သော ပထမဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သလို နိုဘဲလ်ဆု နှစ်ကြိမ်ရရှိသော ပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ်ဦးတည်းသော အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး မတူညီသော သိပ္ပံပညာရပ်နှစ်မျိုးအတွက် နိုဘဲလ်ဆုရသော တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သည်။
↑ Marie Curie – Biography။ Nobelprize.org (4 July 1934)။ 1 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jones, Daniel (2011). Cambridge English Pronouncing Dictionary, 18th, Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-15253-2။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာရီ_ကျူးရီး&oldid=426699" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၀၃:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။